Madaxweynaha Dawladda Federalka Soomaaliya oo Booqdey Goobihii Qaraxu Shaley ka dhacey.
M/weynaha Somaliland Muuse Biixi oo La Kulmey Wafdi Ka Socda Dalka Eritrea..
Hantidii Allaha u naxariistee EX-gen. Cadami oo dad isbaheystey doonayaan in ay ka dhacaan ama Boobaan Agoontii uu ka tagey Marxuumku.
Ganacsato Soomaaliyeed oo Dalka Turkiga Kulan Kula Yeeshey R/wasaare Xasan Cali Khayre.
Maxaad kala socotaa khasaaraha dagaalka u dhaxeeya Galmudug iyo Puntland?
Ugu yaraan siddeed qof ayaa ku dhintay, tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen dagaal culus oo saakay dib uga qarxay Degmada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug, kaasoo weli socda, iyadoo dagaalladu ay weli socdaan. Tirada dhimashada dagaalka maanta ayaa waxaa HOL u xaqiijiyay Ilo lagu kalsoon yahay, iyadoo dagaalkaan...
Xarunta Qaramada Midoobey oo Maanta la Filayo in uu Khudbad ka Jeediyo R/W Soomaaliya KHayre.
Ra’iisal wasaaraha xukuumada Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa maanta oo Jimco ah lagu wadaa in uu khubadisii ugu horeysay ka hor jeediyo shirka gollaha guud ee Qaramada Midoobey ee magaalada New York. Ra’iisal wasaaraha ayaa la filayaa in khudbadiisa uu diirada ku saaro xaaladda Soomaaliya, dhinacyada Ammaanka,siyaasadda , Dhaqaalaha iyo arrimaha...
Abiy Ahmed R/wazaaraha Itoobiya oo Sheegay in Askarta Itobiaanka Soomaaliya Jooga ay Gaystaan Falal Argagixiso.
Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa laamaha ammaanka dalkiisaa ku eedeeyay in ay ku kacaan falal argagixiso iyaga oo si sharci darro ah dadka u xira una jir dila. Kumannaan ruux oo ay ka mid yihiin dad siyaasad u xirnaa ayaa la sii daayay, bishan horraanteediina wuxuu shaqada ka tiray...
Guddomiyaha Golaha Wakiilada Sland C/raxmaan Cirro oo si adag uga hor yimid heshiiska Imaaraadka iyo slnd.
Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland ahna Murashaxa Madaxweynaha Xisbiga WADDANI Dr.Cabdiraxmaan M.Cabdillaahi (Cirro), ayaa si adag uga hadlay mawqifkiisa ku aadan saldhiga Milatari ee Xukuumadda Somaliland ay dawladda Imaaraadka ka siisey magaalada Berbera. Cabdiraxmaan M.Cabdillaahi (Cirro), ayaa sidan ku sheegay mar uu xalay qaar ka mid ah warbaahinta uu kula hadlaayey...
Nin Odey ah oo Xaley Lagu Diley Degmada Qoryooley ee G/sh-hoose.
Koox hubeysan ayaa xalay degmadda Qoryooley ee Gobolka Shabeellaha Hoose ku dilay nin Oday ah oo lagu magacaabi jiray Sheekh Ibraahim Kaba-cadde. Kooxdii dilka geysatay ayaa ka baxsaday goobta ka hor inta aysan ciidamada degaanka soo gaarin, sida goobjoogaal ah ay u sheegeen Hiiraan Online. “Ma garaneyno sababtii loo dilay Sheekh...
Hay’adaha Samafalka ee Maxaliga ah Shir ku saabasan Istaraajiyadda shaqo oo Nairobi ka dhacey.
Shir ku saabsan istaraatiijiyada shaqo ee hayadaha samafalka ee maxaliga ah ee ka hawlgala Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay Nairobi. Shirka ayaa ahaa labo qeybood; qeyb subixii ah iyo qeyb galabkii ah. Saaka ayaa waxaa dhacday qeybtii hore oo hayadaha maxaliga ah lagu marti qaaday. Qeybta galabkii ah oo socota haatan...
Qarax ka dhacey LONDON oo ay ku dhinteen ku dhawaad 10 qof halka 30 kalena ku dhaawacmeen..
Booliska Britain ayaa sheegay in Lix qofood ay ku dhinteen 30 kalana ay ku dhaawacmeen kaddib laba weerar oo xalay ka dhacay bartamaha magaalada London. Weerarada ayaa mid ka mid ahi loo adeegsaday baabuur lagu jiirsiiyey dad marayey buundada London Bridge ee bartamaha magaalada London, oo ka mid ah meelaha...
Gobolka Bari ee Puntlan oo lasoo sheegayo ROOBAB ka da’ey.
Ayadoo abaaro ba'an ay ka jiraan Soomaaliya qeybo badan oo ka tirsan ayaa haatan waxaa laga soo tebinayaa gobolka Bari war wanaagsan oo ah in roobab ay ka curteen ama ka da'ayaan haatan. Dhawaan ayaa korontada meelo badan oo gobolkaa ah la damiyay kadib markii laga baqay inay dhibaato keento...
Dalka Masar oo illaa 12 qof Soomaali ah lagu Xir xirey/waa Maxey sababtu?.
Inta la ogyahay ilaa 12 qof oo Soomaali ah ayaa waxaa xabsiga dhigay booliiska dalka Masar kadib hawlgal boolisku sameeyay. Dadka la xir xiray ayaa lagu waramyaa in ay qaxooti ku ahayeen dalka Masar, madaama waayadii ugu danbeeyay halkaa ay ku sii qul qulayeen dad Africaan u badan oo uga...
Maxamed Sh C/raxmaan Mursal Gudoomiyaha Barlamaanka Federalka oo La Filayo in uu Bulshada La Hadlo Waqtiyada Dhaw.
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah mudanayaasha Golaha Shacabka saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu la hadlo warbaahinta. Guddoomiyaha ayaa la filayaa in uu faah faahin dheeraad ka ah bixiyo mooshinka la keenay in laga soo gudbiyay madaxweynaha dowladda...